प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा शैक्षिक बहसको खाँचो – Puleso
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा शैक्षिक बहसको खाँचो
By:Puleso2 Published Date: बिहिबार, पुस २७, २०७४
देशमा शैक्षिक बहसको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने समय भएको छ । शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासलाई नियालेर राष्ट्रिय हित अनुकूल शिक्षा नीति बनाउनु आवश्यक भए पनि राष्ट्रको प्रतिकूल शिक्षा नीति निमार्ण भइरहेको आभाष गर्न सकिन्छ । शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं र नवौं संशोधनले साँच्चै देशलाई उन्नति प्रगति तर्फ लाने छाँट काट गरेको पाइदैन । शिक्षाक्षेत्र भनेको नेपालको विकासका लागि एकदमै महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्र हो । नेपाल सरकारले २०७४ असोज ३ गते गरेको एउटा गम्भीर गल्ती, गम्भिर भुल नवौं संशोधन ऐन पारित हुनु हो । जे भयो गलत भयो भनेर शिक्षाका विज्ञहरूले समेत बताएका छन् । जुन प्रस्तावमा राष्ट्रपतिद्वारा लालमोहोर समेत लागिसकेको अवस्था छ । सबै विद्यार्थी दशैं तिहार मनाउनको लागि गाउँ फर्किएको बेलामा यो ऐन पारित गरेको विद्यार्थीहरूको आरोप रहेको छ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव नजिकै गरेको उक्त पारित प्रस्तावले शिक्षा क्षेत्रलाई कुनै फाइदा हुनेवाला छैन । यिनै मुद्वा र विषयसंग सम्वन्धित भएर अब बन्ने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत र दूरगामी शैक्षिक योजना के–कस्तो हुने भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण विषय बन्न पुग्ने देखिन्छ । अब बन्ने प्रादेशिक-प्रान्तीय सरकारको विकासे गुरूयोजना अन्तर्गत शिक्षाका विषयहरू पनि मुलधारमा आउनु आवश्यक छ । शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि प्रदेश सरकारले प्रान्त र क्षेत्रको आधारमा माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति बनाउनु आवश्यक छ । जुन प्रान्तको शैक्षिक गुणस्तरमा प्रगति र सुधार हुन्छ तिनै प्रान्त विकासमा अगाडि बढ्ने पक्का–पक्कि देखिन्छ । हरेक प्रान्तमा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कलेज र विद्यालय शिक्षा आ–आफ्नै शैलीमा र स्थानीय भाषाको आधारमा अध्यापन गर्न सक्ने प्रावधान केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ । शिक्षा जगतमा वैदेशिक हस्तक्षेप दिनप्रतिदिन बढिरहेकै छ । उक्त शैक्षिक हस्तक्षेप र विदेशी स्वार्थ अनुकूलको शिक्षा प्रणाली नभई नेपाली भाषा, जाति, जनजाति र क्षेत्रको सुधार गर्ने खालको शिक्षा नीति अपनाउनु आवश्यक छ ।भावी सन्ततीलाई आफ्नो राष्ट्र, राष्ट्रियताप्रति गौरव गर्न सक्ने वातावरण शिक्षाले नै गर्नु पर्दछ ।
बाल्यकालको शिक्षा प्रणालीमा नेपालीपन र नेपाली सँस्कार, सँस्कृति अनुरूपको नैतिक शिक्षा प्रत्येक प्रान्त सरकारको शिक्षा नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान निर्माण गर्नु आवश्यक छ । विभिन्न स्वार्थ र राष्ट्र हितभन्दा बाहिर रहेर खोलिएका बालगृह र मदरसाहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गराउनु आवश्यक छ । किनभने विदेशी स्वार्थमा खोलिएका त्यस्ता बालगृह र मदरसाहरूबाट उत्पादन हुने भविष्यरूपी बालबालिकाहरू माकुराको बच्चा जस्तै हुनेछन् । जसले आफ्नो मातृभूमिलाई चाहेर पनि माया गर्न सक्दैन । जसरी माकुराको बच्चाहरूले आँफूलाई जन्म दिने आमालाई सबै मिलेर खान सक्छन्, त्यसै गरी नेपालको समग्र विषयमा त्यस्ता बालबालिकाले संकट उत्पन्न गराउने र नेपालमाथि नै आक्रमण गर्न सक्ने हैसियत राख्दछ । समयमा यस्ता गम्भीर विषयमाथि प्रादेशिक सरकारले सोच विचार गर्न आवश्यक छ । होइन भने पूर्ण अधिकार सहितको प्रदेश सरकारमा विदेशी विचार र उनीहरूकै अनुकूलतामा कुनै पनि प्रदेश सुरक्षित हुन सक्दैन र हुदैन पनि । त्यसै पनि विदेशी ग्राण्ड डिजाइन अनुरूपमा नै जातीय प्रान्तीय विभाजन भएको र त्यसमा तात्कालिन माओवादी मुखबाट जातीय राज्यको समेत माग विदेशी शक्तिहरूबाटै गराएको भन्ने चर्चा सुनिन्छ ।
जातीय राज्यको माग धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रिय झण्डा परिवर्तन, राष्ट्रिय जनावर परिवर्तन, राष्ट्रिय पोशाक परिवर्तन जस्ता दर्जनौं मागहरू गराउन सफल भएका विदेशीहरूले यसैलाई मुख्य उपलब्धि मानेका छन् । अधिकांश मागहरू पुरा भएका छैनन् ती र त्यस्ता विदेशी स्वार्थका मागहरू अबको प्रादेशीक सरकार मार्फत पुरा गराउन विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको जोड चल्ने नै छ । शिक्षा क्षेत्रमा करोडौँ लगानी गरिरहेका विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले आफू अनुकूलको शिक्षा नीति बनाउन जति पनि रकम खर्चिने अवस्था रहेको छ । केही नेपाली नामधारी विदेशिका भरौटे, दलाल र शैक्षिक माफियाहरूको माध्यम बनेर नेपाली शिक्षा नीति र प्रणालीमा बारम्बार हस्तक्षेप र जरो खन्ने काम भइरहेको छ । यता नेपाली प्रणालीको शिक्षा नीति ढलाउँदै विदेशी अनुरूपको शिक्षालाई मजबुत बनाउदै लैजाने कार्य भइरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी आक्रमण भइरहदा पनि नेपाल सरकार मुक दर्शक भइरहने परिपाटी नयाँ भने होइन । जस कारण अब बन्ने प्रादेशिक शिक्षा प्रणाली, नीतिमा झनै खुल्ला रूपमा नै हस्तक्षेप हुने देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्र नाङ्गिदै जानु भनेको देशको लागि पक्कै पनि राम्रो संकेत भने होइन । शिक्षा क्षेत्रमाथिको आक्रमण भनेको राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि भएको आक्रमण हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । सानो–सानो स्वार्थमा लिप्त भएका शैक्षिक माफियाहरूको घैटोमा घाम लाग्ने अवस्था छैन । त्यसैले सचेत नागरिकहरूबाट नै यस सन्दर्भमा आवाज उठाउनु आवश्यक छ र राष्ट्र, राष्ट्रियताप्रति माया गर्ने जो कोही सर्वसाधारणबाट पनि निर्णायक तह तप्कामा पुगेकाहरूलाई खबरदारी गरिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावी नतिजालाई केवल उनीहरूकै मात्रै उपलब्धि ठान्ने एकाथरीे देख्न पाइन्छ । कागले कान लग्यो भन्दा कान नछामी कागको पछाडि दौड्ने परिपाटी नेतृत्वपंक्तिमा हावी भएको देखिन्छ । जसका कारण समग्र शिक्षाक्षेत्र समस्याग्रस्त भइरहेको छ । नेतृत्वपंक्ति स्वविवेकी र स्वावलम्वी हुन नसक्दा नेपालको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन पुगेको छ । ज्वलनन्त उदाहरणको रूपमा शिक्षक सेवा आयोगको पछिल्लो शिक्षा ऐन नवौं संशोधनमा गरिएका निर्णयहरूलाई लिन सकिन्छ ।
अदूरदर्शिता र दलीय झोले मनोवृत्तिका कारण शिक्षामा गुणस्तरहीन प्रणाली हावी हुँदै गइरहेको छ । दलीय झोले कार्यकर्ता र शिक्षक संगठनका मातहतबाट सिफारिस भएर आउने अधिकांश दलीय शिक्षकहरूबाट देशको शिक्षा प्रणाली खतरामा पर्ने निश्चित छ । जहाँ पाटीको झोला र झण्डा बोकेको आधारमा दिइने जागिर अवसरले शिक्षा प्रणाली नै ध्वंश मात्र नभई शिक्षाक्षेत्र नै दुर्गन्धित हुन पुग्ने निश्चित देखिन्छ । यस्तो अवस्थाबाट देशको शिक्षा सुधारभन्दा धेरै विकृति र विसंगतिमा डुबुल्की मार्ने कार्यभन्दा धेरै केही उपलब्धि हुन कठिन छ । प्रदेश शैक्षिक अवधारणा निर्माण गर्नको लागि यदि दलीय भागबण्डा र सोही आधारमा विभाजित गरेर शिक्षा सुधार गर्न थाल्यो भने चोरको हातमा चाबी थमाउनु सरह हुनेछ । शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्नेहरूको जमात बढीरहेको छ । शिक्षामा राजनीति हावी भइरहेको देख्न सकिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन स्वास्थ्य लगायत अनेकौं बढ्दो समस्याले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन ।
शैक्षिक माफियातन्त्रलाई मलजल गरी मौलाउन दिने दलीय स्वार्थता बीचको सहकार्य पनि हो भन्न सकिन्छ । समाजमा जबसम्म स्वार्थ अनुरूपको कार्यहरू भइरहन्छ तबसम्म खासै ठोस परिवर्तन हुने देखिदैन । परिवर्तन हुने भएको भए सायद नेपाल विश्वको विकसित मुलुकको रूपमा स्थापित भइसकेको हुने थियो । तसर्थ अझ भनौ चुनावी प्रचार प्रसार र घरदैलो कार्यक्रमहरूमा, पाटीहरूका घोषणा पत्रलाई नै आधार बनाउने हो भने त मतदाता दुविधामा पर्ने निश्चित छ । सबैका प्रचारमुखी घोषणा पत्रमा यथार्थता र वस्तुनिष्ठ कमै मात्र पाइन्छ । जनताको लामो समयदेखिको इच्छा चाहना पुरा गर्न भन्दा पनि नेतृत्वपंक्ति आफ्नै घर परिवार, नातेदारी, पुस्तौं–पुस्ताका लागि पुग्ने सुःख सुविधाका साधन जोड्नमा लिप्त हुनु नै राष्ट्रको समग्र विकासको बाधक हो ।
आगामी दिनमा तयार पारिने प्रादेशिक शिक्षा प्रणालीमा व्यवहारिक र नैतिक आचरण संग जोडिएको शिक्षा नीति बनाउनका लागि जनदबाव सिर्जना गर्नु पर्दछ । होइन भने विदेशी भाडाका दलालहरू मार्फत नेपालको विरूद्धमा शिक्षा प्रणाली अगाडि बढ्ने देखिन्छ । पद र पैसाका लागि जुनसुकै हर्कत अपनाउन र गिर्न सक्ने प्रवृत्ति देखिरहेको छ । पैसा बाडेर विभिन्न प्रलोभनमा पारि जनमत किनेर नेतृत्वपंक्तिमा पुगेकाहरूले चुनावी खर्च उठाउने र कमाउ धन्दा गर्ने, ऋणमा चुनाव जित्ने प्रतिनिधिहरूलाई ऋण तिर्न बाटो खोजिरहेका हुन्छन् । तसर्थ आम विकास प्रेमी जनताहरू यस्ता विषयमा सचेत भई खबरदारी गर्ने गर्नु पर्ने अवस्था छ । शिक्षाको शैक्षिक धरातल र मूल चुरो कुरालाई पाखा लगाउदै विदेशी हित अनुकूलको शिक्षा नीतिको प्रयोग गर्न प्रादेशिक सरकार स्वतन्त्र भई नालायक कार्यहरू हुन र गर्न सक्ने बढीभन्दा बढी सम्भावना देखिन्छ ।
नेपाल आफ्नो शिक्षा नीति र प्रणालीभन्दा पनि यूरो र डलरमुखी हुदै गएको केन्द्रीय शिक्षामा समेत पाउने गरिएको छ । यूरो र डलरमुखी मानसिकताले तयार पारेको पाठ्यपुस्तक सामाग्रीहरूको प्रभाव केही मात्रामा देखिन थालेको छ । जसले अनेकौं नामधारीहरूको जन्म गराइसकेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका छौ जहाँ डा. सिके राउतहरू जस्ता धेरैको जन्म हुनु देश नै बिखण्डनको प्रस्ताव र विचारधाराले राष्ट्रमा कार्य हुनु पनि हो, भने माआवादीले चलाएका अधिकांश अभियान, मागहरू जस्तैः जातीय राज्यदेखि राष्ट्रिय महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न चिन्ह उब्जाउनु, मानव अधिकारको नाममा पद्दमरत्न तुलाधर लगायतको सक्रिय उपस्थिति हुन यूरो र डलरको विचारले स्थान पाउनु हो भन्न सकिन्छ । तात्कालिन नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल लगायताको सञ्चालनमा रहेको गैरसरकारी संघ संस्थाको छदमभेषी कार्यहरूलाई पनि नियाल्न सकिन्छ । जसको पहँुच राष्ट्रदेखि अन्तराष्ट्रियसम्म मजबुत रहेको हुन्छ । राष्ट्र हितभन्दा बाहिर रहेर विदेशी स्वार्थ र भाडामा गरिने कार्य उक्त कार्य सञ्चालन गर्ने छद्मभेषीहरू देशका अदृश्य शत्रुहरू हुन् ।
देशमा भएको कमी कमजोरीलाई पहिल्याउदै विदेशी जालझेलमा नेपाली माटोमा विष वृक्ष रोप्ने त्यस्ता कार्यप्रति सचेत भई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो महत्वपूर्ण सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकारले प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ । देशका धेरैभन्दा धेरै नेतृत्वपंक्ति विदेशीको चक्रब्युह र माकुरी जालो रूपी यूरो, डलरमा फस्न पुगिसकेका छन् । जसले गर्दा उनहिरूको मुखबाट गलत भयो भन्ने र गलत गरियो भन्ने विषय आउँदैन ।
यस्ता विषयमा उनीहरूको कुनै प्रतिक्रिया नै हुँदैन । यूरो र डलरको सोझो गर्दा गर्दै राष्ट्रको र उनीहरूको आफ्नो पनि भविष्यमाथि खेलबाड गर्न पुगेका छन् । देशको भाग्य र भविष्य बोकेका राजनीतिक दल पार्टीहरू विदेशी प्रलोभन यूरो, डलर र भारूको मुख ताक्नाले नै भने जस्तो गरी राष्ट्र उन्नति र संमृद्धि तर्फ उन्मुख हुन सकिरहेको छैन । यावत विषय र सन्दर्भलाई मध्यनजर मूल्याङ्गकन गर्दै देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हामी माझ आएको छ । देशको मेरूदण्डको रूपमा रहेको शिक्षा प्रणालीलाई राष्ट्र हितमा उन्मुख गराउदै शैक्षिक क्षेत्रमा दूरदर्शिता र योजनबद्ध कार्यहरूको थालनी गर्नु आजको आवश्यकता हो । जसलाई प्रादेशिक सरकार र नेतृत्वपंक्तिले अक्षंश : पालना गर्दै राष्ट्रको हितमा कार्य गर्न सकोस् यसैले राष्ट्रको विकास गर्न मद्दत गर्नेछ ।
किन भेटे उत्तर कोरियाका राजदूतले प्रचण्डलाई र?
नेपालका लागि उत्तर कोरियाका राजदूत किम योङ हाकले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेका छन् । आज विस्तृतमा...